Afar siyaabood oo sahlan oo Seygaaga lagu tuso inaad jeceshahay - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Afar siyaabood oo sahlan oo Seygaaga lagu tuso inaad jeceshahay
Aad ayay u wanaagsantahay inaad ugu dambeyn guursato ninka riyadaada ah basle waxaa jira waxyaabo yar yar uu seygaaga si hoose kaaga rabo inaad mar kasta ugu sameyso si aad ugu cadeyso inaad jeceshahay.
Waa kuwaan 4 siyaabood oo fudud oo aad ku cadeyn karto in seygaaga aad jeceshahay.
Tusi inaad u xiisto marka uu kaa maqanyahay
Tusikaanka seygaaga inaad u xiistay isagoo kaa maqan waah ab aad ugu caddeyn karto inaad jeceshahay.
Marka uu guriga imaado noqo qofka ugu horeeyo ee uu isha saaro oo albaabka ka furo isla markaana hab iyo shumis isku dar.
La sameey waxyaabaha uu jecelyahay
Inaad la sameyso waxyaabaha uu jecelyahay waa hab kale aad ku tusi karto inaad jeceshahay seygaaga. Inaad la daawato ciyaaraha haddii uu ciyaaraha jecelyahay waa hab kale oo fudud aad ku tusi karto inaad jeceshahay.
Wuu ogyahay inaadan jecleyn ciyaaraha sidaa darteed wuu qiimeyn lahaa inaad waqtiga u hurto adigoo dartiis waxyaabahaas u sameynaya .
Hadiyado u keen
Waa inaadan la sugin oo aadan hadiyad u keenin waqtiga dhalashadiisa kaliya. Inaad hadiyad sabab la’aan ah u keento waah ab aad ugu caddeyn karto inaad jeceshahay. Waxaa hubaal ah inuu qiimeyn lahaa.
Mar kasta usheeg waxyaabaha aad ku jeceshahay
Usheegitaanka waxyaabaha aad ku jeceshahay waah ab fudud oo kale oo aad ku tusi karto inaad jeceshahay. Sidaa darteed maxaa ku jeceshahay Seygaaga? Haddii ay noqon lahayd qaabka uu kuu dejiyo markaad careysantahay, haddii ay noqon qaabka uu u dhoolla cadeeyo, muuqaalkiisa, qaabka uu kuula dhaqmo? Wax kasta ay noqoto, inaad u sheegti waxyaabaha aad ku jeceshahay waah qaab fudud oo aad ku tusi karto inaad jeceshahay.